ဂိမ်းထဲမှာကုန်သွယ်ရေး: သမိုင်းထဲမှာစျေးအကြီးဆုံး - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
အွန်လိုင်းဂိမ်းဂိမ်း၏ရှည်လျားသောနာရီအသုံးပြုသူများအ captivate, နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဒြပ်စင်နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုစေသည်နှင့်အခြားသောကျော်က၎င်း၏သာလွန်သက်သေပြ။ တခါတရံမှာကစားသမားတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် PvP ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဒီဂိမ်းရဲ့ကြည့်မူရင်းဖြစ်ပါသည်သာမရှိတော့ဘယ်သူ့ကိုမှသောလက်နက်များသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်မူထူးခြားတဲ့အမြင်ရှိသည်။ တချို့အစိုင်အခဲပိုက်ဆံဖြန့်ဖို့အဆင်သင့်ထိုကဲ့သို့သောရှားပါးအကြောင်းအရာအဘို့နှင့်ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏သမိုင်းပြီးသား In-ဂိမ်းပစ္စည်းများတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါငွေပမာဏများအတွက်တူအောက်မှာသွားသောအခါများစွာသောအမှုများကိုငါသိ၏။ သို့သော်စျေးအကြီးဆုံးအရောင်းအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအပြစ်လွတ်မပေးပါဘူး။
Warcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလား၏ Zeuzo
EVE Online ကို Revenant Supercarrier
Diablo3Fury ပဲ့
Counter-Strike ၏ StatTrak M9 လှံစွပ်: GO
Dota2အီလှုပျရှားအုံ Wardog
အဆိုပါ Entropia ဠာထဲကနေဒိုင်နိုဆောဥ
Entropia ဠာ၏ကလပ် Neverdie
အဘယ်အရာကိုကစားသမားမူရင်းတူစေခဲ့ပါဘူး! တချို့တောက်ပ gizmos ၏မျက်နှာကို ထောက်. မယ့်ကံဇာတာထွက် lay ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့သေနတ်သမားအဖွဲ့ခံတပ်၏ရွှေဒယ်အိုး 5000 အမေရိကန်ဒေါ်လာများအတွက်ပြီးသား 2014 ခုနှစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပင် Patti ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ကို virtual ပစ္စည်းများအတွက်ပိုက်ဆံမျိုးပေးရကျိုးနပ်ဖြစ်သနည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဆုံးဖြတ်ချက်များပေမယ့်ဝယ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေအိုး - မဆိုအပိုဆောင်းအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျမဟုတျကွောငျးရုံအသားအရေ
လူကြိုက်များ MMORPG Warcraft ကစားသမားကမ္ဘာ့ဖလားသပိတ်မှောက်စက်ပြင်အမျိုးမျိုးနှင့် Level ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မရပ်မနားဆေးဝါး 600 နာရီကြာအောင်ထားပြီးသောသူရဲကောင်း Zeuzo, 10 တထောင်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်မှု၏ Blizzard အတွက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်မကြာမီဇာတ်ကောင်များနှင့်ဝယ်ပိတ်ဆို့မထားဘူး, အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်စာမဖတ်ခြင်း, အိတ်ကိုင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။
EVE Online စီမံကိန်းတွင်အာကာသယာဉ် Revenant Supercarrier မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်အလွန်ကြီးမားသောကြယ် Cruiser, များစွာသောကစားသမားဖြစ်သောအိပ်မက်လှပါတယ်။ သို့သော်ယခုသတ္တု၏ဤအပိုင်းအစက virtual intergalactic အမှိုက်ပုံပေါ်လဲလျောင်း။ 2007 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါကစားသမားများထဲမှ 10 တထောင်ဒေါ်လာသင်္ဘောဝယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, တယောက်ကိုတယောက်ကဏ္ဍကနေကားမောင်း။
မပျော်အသစ်သောအဝတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးကံဇာတာသုံးစွဲခဲ့သူဖောက်သည်, အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အဖြစ်အပျက်၏တိတ်ဆိတ်ထိတ်လန့်ဆဲနှင့်လုပ်နိုင်နှင့်အမျက်ဒေါသ၏မထိုက်မတန်အတွက်လက်သို့ရောက် လာ. အရာအားလုံးကိုရိုက်ခတ်။
လျင်မြန်စွာတစ်ဦးသူလျှိုများ၏လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူကြသူကောက်ကျစ်ပင်လယ်ဓားပြများပြန်ပေးလော့အတူကျပ်, ကိတ်မုန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသိမ်းဆည်းရမိ
Diablo3အာဏာအရှိဆုံးဒဏ္ဍာရီတူတစ်ခုမှာရူး 14 တထောင်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်နိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကျဆင်းသွား, သူ၏ပျော်ရွှင်ပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းအရာပေါ်အတွက်လက်ငင်းငွေချေရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အရစ်ကျတစ်လှည့်လည်ပေါင်းလဒ်အတွက်ကစားသမားတစ်ဦးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်မှုကျရှုံးလိမ့်မယ်စေရန်။ Blizzard အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသုံးပြီးကစားသမားများအကြားအပြန်အလှန်ကြိုဆိုပါတယ်မထားဘူး။
"အမျက်ဒေါသ၏ပဲ့တင်သံ" ဟုအဆိုပါဂိမ်း Diablo ၏သမိုင်းအတွက်စျေးအကြီးဆုံးလက်နက်ခဲ့ 3
GO: 2015 ခုနှစ်တွင် CS ၏သမိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ရှိ၏။ လှပသောအသားအရေဓါး StatTrak M9 လှံစွပ်အမည်မသိ 23850 ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီနရောမှာဂိမ်းတွင်ဤသေစေနိုင်သောလက်နက်များတစ်ဦးတည်းသာမိတ္တူလည်းမရှိ။
အဆိုပါကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူရေနွေးငွေ့ဂိမ်း Dota2ကို item ၏သမိုင်းအတွက်စျေးအကြီးဆုံးကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေဆက်သားများအတွက်အသားအရေဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအီလှုပျရှားအုံ Wardog မတော်တဆမှုအားဖြင့်စာရေးသူအနေဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ သက်ရောက်မှု၏ထူးခြားသောပေါင်းစပ်သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဂိမ်းကစားမြည်းစမ်းခဲ့မှုဂရပ်ဖစ် bug ကိုမှအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ခြောက်လလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီအန္တရာယ်ကင်းဇာတ်ကောင်ထားပြီး 34 တထောင်ဒေါ်လာဝယ်ယူခဲ့သည်။
အားလုံးလက်ရှိတွင်ဂိမ်းထိုသို့သောတမန်တို့ကို5ကိုအပိုင်းပိုင်း, သူတို့သည်နောက်တဖန်မထက် $ 4000 များမှာ
အွန်လိုင်းဒုတိယအဘဝကစီမံကိန်းကိုအပြည့်အဝကစားသမားတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မှန်ဖြစ်လတံ့သော, တစ်ပြင်လုံးကိုသစ်ကိုဤလောကသို့ငုပ်ရာပူဇော်သက္ကာကို၎င်း၏အမည်အားအပြစ်လွှတ်။ ဒီနေရာမှာအစစ်အမှန်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့, သင်, အမှုအရာဝယ်ယူရန်အဝတ်အစားတွေဝယ်အိမ်နှင့်ကားကိုပေးနိုင်သည်။ 50 တထောင်ဒေါ်လာတစ်ဦးကတမြို့လုံးမှရောင်းချခဲ့သည်။ အဆိုပါအမ်စတာဒမ်၏ကို virtual ဗားရှင်းရုံမူရင်းကဲ့သို့ဒုတိယအဘဝများ၏သမိုင်းထဲမှာစျေးအကြီးဆုံးဝယ်ယူဖြစ်လာသည်။
ကောလာဟလမြို့တော်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အစစ်အမှန်အနီရောင်-အလင်းခရိုင်၏ကိုယ်စားလှယ်များကဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းရှိပါတယ်က virtual န်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
Project မှ Entropia ဠာအလွန်အံ့သြစေရန်ငြိမ်းမထားဘူး။ ဤနေရာတွင်ကစားသမားအိမ်ခြံမြေဒါပေမယ့်လည်းရို့ကားတစ်ဦးကို item မသာဝယ်ယူနေကြသည်။ ဥပမာ, ဂိမ်းကစားများထဲမှ 70 တထောင်ဒေါ်လာပဲလှပတဲ့အလှဆင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ယူဆသောထူးဆန်းဒိုင်နိုဆောကြက်ဥ, ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏စာရင်းများတွင်နေထိုင်၏နှစ်နှစ်အကြာတွင် Pseudo-ဝယ်နှင့်အခြားကစားသမားများကိုတိုက်ခဲ့ရသောကြီးမားနဂါး, အကောင်ပေါက်သောအခါ, အံ့သြစရာဆိုပါစို့။
MMO Entropia ဠာအစစ်အမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလန်းစပြုပြီသည်အဘယ်မှာရှိခေတ်မီဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစီမံကိန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကစားသမားစားသောက်ဆိုင်များ, ကဖေး, Spa မ်ားနှင့်မြေတပြင်လုံးဂြိုလ်နေသောသူတို့တွင်တစ်စုံတစ်ဦး၏ပစ္စည်းဥစ္စာကို, မသွားအစိုင်အခဲပိုက်ဆံ lay ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ ဂိမ်းကစားသူ Jon Jacobs တစ်ဦးဂြိုဟ်ကလပ်ဖျော်ဖြေရေးအသွင်ပြောင်းသောဂြိုဟ်သိမ်, ဝယ်ယူခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းနားလည်တဲ့ဂိမ်းစိတ်ကူး 635 000 ဒေါ်လာစီးပွားရေးရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
ဂိမ်းကစားသူ $ 100,000 အဘို့ 2005 ခုနှစ်တစ်ဦးဂြိုဟ်သိမ်ဝယ်
တောင်မှယောဟနျသ Jacobs ကလပ်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မနိုင်, မှတ်တမ်းများ၏ဂင်းနစ်စာအုပ်သို့ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အမေရိကန် $6သန်း - နိူးတဲ့အုပ်စုတစုရဲ့ Virtual World ဟာရူးသွပ်ပမာဏကိုများအတွက်ဂိမ်း developer များအနေဖြင့်ကလပ်ဆိုဂြိုဟ်ဝယ်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဂိမ်း Donut နှင့်ကစားသမားများအကြားအရောင်းအအွန်လိုင်းဂိမ်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပိုပြီးကို virtual ပစ္စည်းများအစစ်အမှန်တန်ဖိုးကရရှိ။ အဆိုပါကစားသမားလက်ဝတ်ရတနာ, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, လက်နက်နှင့်ဒဏ္ဍာရီကမ္ဘာဝယ်ဖို့အတူတူပင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူတည်လျှင်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုသိ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, မှတ်တမ်းများ Entropia ဠာမကြာမီ, ရိုက်နှက်ခံရလိမ့်မည်။